4 nooc oo badan oo la isticmaalay | Abuurista khadka tooska ah
Marar badan lama siiyo ahmiyadda ay u qalanto, laakiin xulashada font marka la fulinayo mashruuc waa mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan.
Aragtidayda, waxaan u maleynayaa inay tahay gabal muhiim ah oo si weyn u saameeya naqshadeynta, tusaale ahaan, waxay siin doontaa dabeecad aad u qurux badan, firfircoon, dabeecad xiiso badan, iwm.
Taasi waa sababta aan ugu fikiray sameynta liis yar oo ka mid ah afar nooc oo ay si weyn u isticmaalaan naqshadeeyayaasha taasna, marka lagu daro, sidoo kale badanaa waan istcimaalaa, waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto.
Jaale: Sannadkii iigu horreeyay ee waxbarashadayda, mid ka mid ah macallimiintii ugu fiicnayd ee aan soo qabtay iyo naqshadeeye weyn ayaa ii sheegay: "Marka shaki jiro, Helvetica" Tan iyo markaasna shaki kama qabo. Waxaa la abuuray 1957 by Max Miedinger iyo Edouard Hoffmann. Waa mid ka mid ah noocyada ugu isticmaalka badan adduunka ee naqshadeynta.
Mustaqbalka: Waa jaangooyo ku saleysan qaababka joomatari ahaan sida laba jibbaaranaha, wareegyada iyo saddexagalka. Waxaa loo qorsheeyay dhawr sano ka hor Helvetica, 1925 kii Paul renner. Waxaan ka heli karnaa noocyo kala duwan, ganaax, semi-madow, super madow, iwm.
MYRIAD: Nooca qoraalka ee aan helo maalin kasta markaan furayo Sawirahayga asal ahaan. Waxaa qaabeeyay Robert Slimbach iyo Carol Twombly loogu talagalay Adobe Systems sanadihii 90-meeyadii. Tan iyo markii la qorsheeyay, dib-u-soo-curinno badan oo ka mid ah ayaa la sameeyay, maaddaama aan hadda ka heli karno qaybteeda 'Myriad Web', oo loogu talagalay in lagu daawado shaashadaha.
Keen: Nooca sawirka oo loogu talagalay 1989 Carol labalaab, naqshadeeye shirkadda Myriad. Qaab-qoraalka noocaan ah waxaa lagu dhiirrigeliyay qoraallada salka u ah tiirarka Trajan, oo magaciisuna sidoo kale ka yimid Waa font aan u arko inay leedahay shaqsiyad iyo dabeecad.
Runtu waxay tahay inaan hadda haysanno noocyo kala duwan oo far ah oo aan adeegsanno, in kasta oo ay tahay inaan qirto in markaan jeclahay farta aan inta badan u isticmaalo xoogaa yar. Adiguna, muxuu yahay nooca aad u adeegsato markii hore?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » 4 noocyada ugu badan ee la isticmaalo
Keyframes waxay soo gaareen Adobe Character Animator